Somaliland: Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Axmed Jaanbiir Suldaan oo markii ugu horaysay ka hadlay Saldanada uu ka soo jeedo ee Subeer Awal - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Axmed Jaanbiir Suldaan oo markii ugu...
Axmed Jaanbiir Suldaan oo ahaan jiray wasiirkii hore ee Arrimaha gudaha xilal badana ka soo qabtay SNM iyo Somaliland isla markaana ka soo jeeda Qoyska leh Saldanada Subeer Awal oo la aas aasay 1770-kii, wakhtigaas oo lagu Caleemo saaray Garaadkii ugu horeeyey magaalo xeebeeda Berbera.
Axmed Jaanbiir Suldaan iyo Cuqaasha ka soo jeeda qoyska Reer Garaad Boon oo manta shir jaraa’id si wadajir ah ugu qabtay Hotel Xaraf ee Hargeysa ayaa sheegay Qoyskooda inaanu ka dhex jirin wax khilaaf ah oo sababay in Suldaan kale loogu sameeyo, isagoo sheegay waligeed na in aanay dhicin arrintaasi.
Axmed Jaanbiir waxa uu xusay Suldaan Xasan in uu yahay Suldaanka Guud ee Subeer awal ninka kale ee la sameeyayna uu yahay Bob, isagoo ku saleeyey in saldanadooda dhaqan u lahayd marka qofka hayaa dhinto in la Caleemo saaro qof ka bedelaya, taasi na aanay dhicin, cid samaysatay na aanay garanayn.
Axmed Jaanbiir waxa uu caddeeyey Saldanada Subeer awal inay leeyihiin beesha Subeer awal oo dhan meel ay kaga tashatay in cid kale loo magaacaabaana aanay jirin, isagoo sheegay wiilka ka soo jeeda Qoyskoodu haddii uu damac galay in uu xilal kale doonto laakiin aanu qaadan Karin Koofiyadda dhaqanka ee Suldaan Xasan saaran.
Axmed Jaanbiir Suldaan waxa uu sheegay beesha Subeer awal inay caddaysay mawqifkeeda isla markaana ay taageertay Saldanada Faca-weyn ee Suldaan Xasan.
wasiirki hore Gudaha jsl